Naya Drishti | ...... त्यसपछि हिरामाथी अ'न्धाधुन्दु रड र खुकु'री प्रहा'र भयो - Naya Drishti ...... त्यसपछि हिरामाथी अ'न्धाधुन्दु रड र खुकु'री प्रहा'र भयो - Naya Drishti
…… त्यसपछि हिरामाथी अ’न्धाधुन्दु रड र खुकु’री प्रहा’र भयो
तुलसीपुर : यहि चैत २ गते सोमबार राति साढे १२ बजे तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ नामीनगर निवासी २४ बर्षीय हिरा डाँगी माथि खु’कुरी प्रहा’र भयो । खु’करी प्रहा’रवाट गम्भीर घा’ईते भएका डाँगीको उपचारको क्रममा सोमबार काठमाडौंमा मृ’त्यु भईसकेको छ । उनको मंगलबार दिउसो पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्त्य’ष्टी समेत गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ जलसेवा नजिकको कच्ची सडकमा केही युवाहरुले खुकु’री प्रहार गरेका थिए। खु’कुरी प्र’हार गरेको आरोपमा तुलसीपुर ६ गोलौरा निवासी २३ बर्षीय अनुप बस्नेत, रजौराका २२ बर्षीय शुसिल बस्नेत, सोही ठाउँका अमिक खड्कालाई प’क्राउ गरिएको छ ।
त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० नयाँगाउँ निवासी २४ कस्मिर टण्डन भने फरा’र छन । यी चारैजनाको नाममा किटानी जाहेरी परेको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक चक्रडमर पालले जानकारी दिनुभयो ।
पक्रा’उ परेका तीन जनालाई म्याद थप गरि अनुसन्धान थालिएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक चक्रडमर पालले बताए । आज म्याद थप गरेर अनुसन्धाको बाटो खोल्ने र उनीहरुलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान गराउने उनले बताए ।
अहिले फरार रहेका कस्मिर टण्डनको खोजी कार्य तिब्र पारिएको प्रहरीले बताएको छ । टण्डन रहन सक्ने स्थान तथा आफन्तिहरुको घरमा पनि खोजी गर्ने कार्य भईरहेको प्रहरी निरीक्षक पालले बताए । साथै मोवाईलको ट्रयाकवाट समेत खोज्ने कार्य भईरहेको छ ।
त्यसपछि हिरामाथी खुकु’री प्रहा’र भयो :
प्रहरीको प्रारम्भीक अनुसन्धान अनुसार हिरा र अनुपको सामान्य विवाद भएको रहेछ । त्यसपछि , सोमबार राति साढे १२ बजेतिर हिरालाई शुसिलले पानीको पम्प नजिकै काम छ, भनेर बोलाए । शुशिल अनुप समुहका थिए । उनले बोलाएपछि हिरासहित ४/५ जनाको समूह शुसिल सहितको समूह भएको ठाउँमा पुगे ।
त्यही विवादलाई मिलाउने भनेर हिरालाई त्यहाँ बोलाईएको रहेछ । त्यसपछि उनीहरु तुलसीपुरको एक होटेलमा संगै बसेर खाए । खानेक्रममा विवादले झन ठूलो रुप लियो ।
विवादले ठूलो रुप लिएपछि शुसिलको समूहका केही ब्यक्तिहरुले हिरामाथि रड र खु’कुरी प्रहार गरे । त्यसपछि हिरासंगै गएका उनका साथीहरुले घाईते भएका हिरालाई उठाएर राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर पुइर्याए ।
अस्पतालमा सामान्य उपचार पछि कोहलपुर रेफर गरियो । कोहलपुर पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारकालागि काठमाडौं लगियो । तर काठमाडौंमा पनि उपचार सम्भव भएन । अस्पताल पुयाउदा डाक्टरले उनलाई मृत घोसना गरे । उनको मृ’त्यु भयो ।
#खुकुरी प्रहार #हिरा डाँगी
सल्यानमा ३ बाबू छोरा मिलेर एक जनालाई खुकुरी प्रहार